Ị̀ta ǹke mmụ̀zù Texas A&M - Wikipedia, Njikotá édémédé nke onyobulạ
Ụlọ̀ ǹkè ọ̀mà nà nwanziri ǹke àdịlụ ǹkè mmụ̀mìe mmụ̀taubì nà òrèrjè, afọ̀ 1916.
Nà ogbè ukwu nà afọ̀ nnarị ǹkè m̀bụ ya, mbàdènye nà Texas A&M gbòchìrì ị kwere naanị ụmụ̀nwoke ndị ọcha ǹke kwere ị nyere aka nà nwanziri ǹke àdịlụ ị nweta nzụnzụ agha. Nà ogè â, ọnụọgụ̀gụ̀ bìrìntàkịrị ǹke ndị ụmụ̀nwaànị̀ bụ̀ òle ndị h'e kwèrè ị gata okuzi mà h'è kweghị ha ị gote ngomụ̀chata. Nà ogè agha ụ̀wà I, 49% ǹkè ọ̀mụ̀chata A&M dị̀ nà ọrụ òtùagha, nà nà afọ̀ 1918, okuzi ǹke ǹtọrọ a kwabàla nà ime ǹhù òtùagha ị lụsuagha nà France. Ǹà agha ụ̀wà II, Texas A&M mepụ̀tàrà ịhẹ karịrị 20,000 nà ndị ụ̀sụ̀ agha, nke kwere ndị isi agha kara mmụ̀kọta njikọ̀taọ̀hà nà mmụ̀kọta òtùaghammiri njikọ̀taọ̀hà ha àbụọ.
Nà nkịrị ogè soro agha ụ̀wà II, ìzùǹdeìwu Texas àkatawaria Texas A&M kà mmụ̀zù nà ụlọ̀akwụkwọ ntọ ǹkè mmemme mmụ̀zù Texas A&M, ǹke mere ya nà ụ̀ma kà ọnọ̀dị ya dị mmara kà ịhẹ dị ichè ya nà mmụ̀zù Texas. Nà afọ̀ìri ndị 1960, ìzùǹdeìwu ọ̀hàchị a gọwaria ụlọ̀akwụkwọ â kà ọ bụrụ mmụ̀zù Texas A&M (Texas A&M University), nà "A&M" ahụ̀ à dịzie màkà naanị uchemàrà. Nà òkpurù ọ̀chịchị onye isi James Earl Rudder, ụlọ̀akwụkọ èkwebà èbò niile mà ndị isiojie nà mmụ̀kọta. Ịbaòtù nà nwanziri ǹke àdịlụ à dizie nà ịhẹ ǹhọ̀rọuchè.
Nà ọkàrà afọ̀nnarị 20 ǹkè àbụọ, mmụ̀zù â bụ̀ ịhẹ ha hụ̀rụ̀ màkà nnyocha ya nà mmụ̀zù òkèm̀be-sea nà mmụ̀zù òkèm̀be-m̀bara. Ụlọ̀akwụkwọ è nwèle ahà ya nà òtìtokwa nà afọ̀ 1997 nà ǹtọ ǹkè ọbaakwụkwọ m̀meokeishi ǹkè George Bush nà ekìkì ọ̀dị̀dàanyanwụ ǹkè ọ̀gbọmụ̀.
Wefụtàrà ya shí https://ig.wikipedia.org/w/index.php?title=Ị̀ta_ǹke_mmụ̀zù_Texas_A%26M&oldid=63066
Last edited on 21 Ọnwaìri 2018, at 19:55